Wasiir Beyle: "Ishii buktaay ku bikaacso.." Jawaab kulul oo ku socota Aqoonyahan & Siyaasiyiin dhaliilay.. (Daawo) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirka Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa si kulul ugu jawaabay siyaasiyiin iyo aqoonyahnno fasiraad khaldan ka bixiyey hannaanka deyn cafinta ee Soomaaliya.
Wasiir Beyle oo shir jaraa’id maanta ku qabtay xafiiskiisa ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey halka ay marayso deyn cafinta Soomaaliya, wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay buuxisay shuruudihii loo dhigay oo lagu bixiyey deymihii ay ku lahaayeen Bankiga Adduunka iyo Bankiga Hormurinta Afrika, iyado 25-ka bishan go’aan lagu dhaafayo deynta kasoo bixi doono deyntii Hay’adda IMF ee lacagt adduunka.
“Ishii buktaay ku bikaacso lacagtii ay nagu lahayd Hay’adda IMF bishan 25-keeda ayaa la dhaafayaa.. waxaa jira hab lacagta lagu dhaafa oo dadka bowsada aanay fahmi karin. …Anigaa idin sheegaya ee i dhageysta dadka wax bowsada ee aan waxan fahmi karin.. Hab ayaa la sameeyay lacagta la inooga dhaafo, iyaguna aanay lacagtoodu ku waayin habkaasi waxaa la yiraahdaa: ‘Bridge Financing’ haddii aadan fahm karin wax akhriso…” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda oo si toos ah ula hadlayey Aqoonyahanno iyo siyaasiyiin wax ka sheegay deyn cafinta Soomaaliya oo ku dooday inaysan jirin wax deyn ah oo la cafiyey.
Wasiir Beyle wuxuu caddeeyay inaysan dowladda Soomaaliya qaadan doonin wax deyn ah oo cusub, ayna been tahay wararka sheegaya in deynta loo cafinayo si deyn kale loo qaato; wuxuuna u sheegay dadka sida khaldan uga hadlaya deyn cafinta inay bartaan sida uu u shaqeeyo nidaamka deyn cafinta uu faahfaahin dheer ka bixiyey.
Jawaabta Wasiir C/raxmaan Beyle ayaa si toos ah ugu socotay Aqoonyahanno iyo siyaasiyiin dhalilay deyn cafinta oo uu ugu horeeyo Prof. Yaxye Sheekh Caamir oo muddooyinkii danbe baraha bulshada ku baahiyey inaysan jirin wax deyn ah oo Soomaaliya laga cafiyey.
C/raxmaan Ducaale Bayle
Previous articleDowladda Somalia oo si kumeelgaara u fasaxday Duulimaadyada Caalamiga ah (Akhriso sababta)
Next articleShirkadda Ethiopian Airlines oo joojisay inay tagto 30 dal oo Somalia ka mid tahay. (Akhriso Liiska)